Ụwa nke ejiji dị iche na multifaceted. Ọtụtụ ụdị na ntụziaka, ọtụtụ aro na aro - otu esi ghọta ihe a niile iji nweta ọdịdị pụrụ iche nke gị? Na-aza ajụjụ a, nke mbụ, ọ bara uru ịṅa ntị na ndị a na-akpọ akara ngosi nke ejiji na ụdị.
Ihe ngosi nke ejiji nke narị afọ nke 20
Enwere aha ndị nwe ikike na ụwa ejiji na-apụghị ịgbagha agbagha ruo ọtụtụ iri afọ. Ọ bụ ikike a na akara ngosi nke ejiji nke Coco Chanel ghọrọ. Kedu onye na-amaghị obere obere muslin nwa ya na akwa pel? Ọ ka dị mkpa taa, ndị mmepụta na-enye ụfọdụ nuances nke oge a. Na uwe ya a ma ama? Great Coco nyere ụwa ọ bụghị naanị uwe, o nyere ya ụdị - ụdị ejiji, ịma mma na nwanyị.
Iji akara ngosi nke iri afọ ise nke narị afọ gara aga, n'ezie, ọ ga-ekwe omume ibu Грэту Гарбо na Marlene Dietrich . Ruo taa, Jacqueline Kennedy na-anọgide na-esetịpụ ihe nlereanya, ụdị ejiji na-egbuke egbuke, mkpuchi anya, ugogbe anya anwụ, akpa uwe, na akwa jaket nwere ogwe atọ.
Ọ bụghị ihe mberede na a na-akpọkwa akara ngosi nke ụdị ahụ bụ Merlin Monroe. Onye na-enweghị mmasị ma na-adịghị amasị ya nnọọ nwanyi, ma n'ụzọ ziri ezi sexy uwe? Ụdị ya bụ ụdị ịhụnanya na mmetụta anụ ahụ.
Onye na - enweghị ike ịkọwa onye omeebe nkiri vidio Soviet Lyubov Orlova. Nwa nwanyị nke nwere obi eziokwu. Ịbụ akara ngosi nke ịke, otu mmasị nke ọtụtụ nde mmadụ n'oge ahụ na mba ahụ bụ obi ike.
Na akara ngosi, ma 60 afọ, n'aka nri, ọ ga-ekwe omume ibu otu nwanyị dị egwu - Catherine Deneuve. Ọ bụ enyi na ịlụ ọrụ nke nnukwu Yves Saint Laurent. Ụdị ya - otu French - na-anya ọtụtụ nde ndị inyom. Ekebe ndị mara mma, ndị na-acha odo odo, ndị na-acha nwayọọ na-acha ọcha, ndị zuru okè, na ntutu ntutu isi - ihe ndabere nke onyinyo ya. Dika onye Frenchwoman n'ezie, Madame nwere ike ichota ihe nwanyi nke na-adighi adighi adighi nma n'igoro uwe. Onye na-eme ihe nkiri na ugbu a, n'agbanyeghị afọ ndụ, ọ dị mma, na-enye ụwa ihe nlereanya.
Audrey Hepburn, Grace Kelly, Brigitte Bordeaux, Twiggy (Leslie Hornby) bụ aha ndị ghọrọ ihe oyiyi nke ụdị nke 60s nke narị afọ gara aga, ọ bụ ezie na ha ka na-anọgide.
Ihe ngosi nke ụdị nke narị afọ nke 21
Ọgbọ ọhụrụ nke na-abịanụ pụkwara ịdị na-enwe obi ụtọ maka àgwà ndị dị ịrịba ama n'ụwa na ụdị ejiji. Onye ọ bụla anụwo aha Angelina Jolie, na-egosi na ọ dị mma ma dị mma; Kate Moss, onye na-ejikwa nlezianya na-ele anya jeans, top na jaket akpụkpọ anụ maka $ 9 nde (ego ọ na-enweta kwa afọ); Mary Kate na Ashley Olsen na-enwe obi ụtọ ha.
A pụrụ ikwu na akara ngosi nke oge a na Kate Middleton. Ònye, n'agbanyeghị otú iṅomi ya nwere ike ịbụ. E kwuwerị, ọ ghọrọ nwunye ọ bụghị nanị onyeisi, ma nwa ya bụ Diana Spencer. Otu Lady Dee, onye ka na-anọgide na-abụ Queen nke style. Willy or involuntarily, ma Kate kwesịrị ịkwado ọnọdụ nke nwa di nwa-nwoke nke Diana. N'oge na-adịbeghị anya, iji akara ngosi nke oge a, ụfọdụ ndị na-akatọ ejiji malitere ịkwado nwunye nke onyeisi US President Michelle Obama.
Kedu ka esi ghọọ akara ngosi nke ụdị?
Iji mepụta onwe gị ihe pụrụ iche enweghi iwu, iwu na ụkpụrụ. Ọnụnọ dị na uwe mwụda nke ihe ndị dị n'eluigwe na ala nke dabara adaba na ọnụ ọgụgụ ahụ bụ ihe ndabere maka ịmepụta ụdị onwe ya. Ma ọtụtụ, ma eleghị anya, ihe bụ isi - emela ka ejiji ejiji, ịchụso ihe dị oké ọnụ ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ. Ịdị mma anaghị apụta inwe ihe dị oke ọnụ. Chanel a na-enweghị atụ kwuru, sị: "Enweghị ego ọ bụghị ihe mere ị ga-eji ghara ịke." Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-emecha nke ọma abụghị ndị kasị baa ọgaranya. Echiche nke otu ihe na uto bụ ndabere nke ụdị.
Akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ nwanyị - ụdị, ụdị, ihe ị ga-eyi?
Crepe chiffon - ụdị ụdị ákwà?
Esi eji akwa akwa?
Uwe ejiji nke New Year - nke kachasị ejiji ejiji ogologo na obere uwe
Foto na mmalite oge opupu ihe ubi
Obere oyi foto foto
Kedu ihe ị ga-eji akpụkpọ ụkwụ aja aja?
Ncha na uwe elu
Mkpụrụ tomato na-acha mmanụ aṅụ
Parathyroid gland bụ akụkụ buru ibu nke obere akpa
Uwe maka agba egwú hip-hop
Mkpa pancakes na oghere na nwanyị fermented - uzommeputa
Onyinye dị iche iche maka ụmụ nwoke
Kedu otu esi ahọrọ ákwà mgbochi maka ime ụlọ?
Osteoarthrosis nke aka
Mastopathy na-edozi ahụ
Mmiri ara ehi - nsogbu
Ejiji Esi - Ntanye
Okpokoro agba aja n'ala - na ihe ị ga-eyi?
Nri mkpụrụ - ọma na ihe ọjọọ
Echepụta ntu ntuelu 2014
Kedu ihe ụlọ nsọ ahụ na-arọ banyere?